Lenovo Snapdragon5| နှင့်အတူပထမဆုံး 855G mobile ကိုထုတ်လုပ်မည် Androidsis
5G ကွန်ယက်သည်လက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်မျှော်မှန်းထားသည့်ဆက်သွယ်မှုနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ဈေးကွက်ရှိမည်သည့်ဖုန်းတွင်မျှအထောက်အပံ့မပေးထားသောကြောင့် download နှင့် upload မြန်နှုန်း၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအလွန်ထူးခြားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူလာမည့်နှစ်တွင်ထိုစာအုပ်များ၏ပထမဆုံးမိတ္တူရောက်ရှိလာလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။
အာကာသပြိုင်ပွဲကဲ့သို့ပင်များစွာသောထုတ်လုပ်သူများသည်၎င်းတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လုပ်ဆောင်နေကြပြီးအခြားကုမ္ပဏီများရှေ့တွင် terminal တစ်ခုကမ်းလှမ်းရန်မျှော်လင့်ကြသည်။ Lenovo ၏ဖြစ်ရပ်မှာတရုတ်လူမှုရေးကွန်ရက် Weibo မှ၎င်း၏ဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Chang Cheng ၏ပြောကြားချက်အရ၊ Qualcomm ၏ Snapdragon 855 နှင့်အတူဤကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့မည့်ပထမဆုံးမိုဘိုင်းကိုပေးလိမ့်မည်.
Qualcomm ၏ SD5 ကိုဆက်ခံသူ 845G မိုဘိုင်းတစ်လုံးရောက်ရှိလာခြင်းသည်ယုတ္တိရှိလှသည်။ လာမည့်ချစ်ပ်သည်ဤကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့် modem တစ်ခုနှင့်အတူလာလိမ့်မည်ကျန်အပိုင်းများတွင်တိုးတက်မှုအပြင်မြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မှသည်၎င်း၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအထိ။
ဤဆိပ်ကမ်းရောက်ရှိမည့်အမည်သို့မဟုတ်စီးရီးကိုမသွားရသေးပါ၊ အကြောင်းမှာသွားရန်လမ်းကြောင်းများစွာရှိနေသေးသည်။ တူတူဘဲ, 2019 ၏ပထမသုံးလပတ်တွင်ရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ထား အကယ်၍ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပထမဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါကဒုတိယသုံးလပတ်တွင်တရား ၀ င်ကြေညာခြင်းမရှိသော Samsung နှင့် Oppo မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကိုစတင်မိတ်ဆက်မည်ဟုမျှော်လင့်ရပေမည်။
ရှာတွေ့သည်: Qualcomm သည် Snapdragon 855 ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်
Huawei၊ OnePlus, Nokia, Samsung, Oppo, Vivo, ZTE နှင့် Nokia စသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် 5G ဖုန်းတစ်မျိုးကိုတီထွင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည် Snapdragon 855. ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားစမတ်ဖုန်းများယူဆောင်လာလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ နောက်လာမည့်နှစ်တွင် terminal တစ်ခုချင်းစီကိုတင်ဆက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းပညာနှင့်စျေးကွက်အတွင်းတွင်လွှတ်တင်မှုအမြောက်အမြားရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မှတ်သည်။ မကြာမီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Lenovo သည် Snapdragon5ဖြင့်ပထမဆုံး 855G mobile ကိုထုတ်လုပ်မည်
Relic Looter ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောမြေအောက်ခန်းထဲတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရတနာများရှာဖွေပါ